ဥာဏဗလ- စာရိတ္တဗလ ခိုင်ဘို.လိုတယ် ။
မြန်မာတွေ ဘာလိုနေသလဲ လို.မေးရင် ဥာဏဗလ ၊ စာရီတ္တဗလတွေ ပြည်.စုံဘို.လိုနေတယ် ? ဒီ ၂ ချက် မပိုင်ရင် နောင် ပြင်နိုင်ခဲသည့် အမျိုးလိုပြောရလိမ့်မယ်၊
အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုက ပြည်နယ်တွေမှာ သူပြည်နယ်ဥပဒေနဲ့သူရှိကြပြီး၊ တနိုင်ငံလုံးက လိုက်နာကြရမဲ့ဥပဒေတွေလဲ ရှိကြတယ် လို.သိရပါတယ် ၊ (ဗဟု သုတပါ ) ။
အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု ပြည်နယ်တွေမှာ သူတို.ဘာသာစကား သပ်သပ် စာပေသပ်သပ်ရယ်လို. ရှိတယ်မကြားမိဘူး ။ ပြောရမယ်ဆိုရင် ကမ္ဘာ.လူမျိုး
ပေါင်းစုံ ၊ ဌာနေတိုင်းရင်းသား ပေါင်းစုံ စုပေါင်းနေထိုင်ကြတဲ့ အမေရိကန် ပြည်ထောင်စုမှာ ရုံးသုံး စကားနဲ.စာဟာ အမေရိကန်-အင်္ဂလိ(ရှ) လို.ခေါ်တဲ့ စကားနဲ့ စာဘဲ ဖြစ်တယ်လို.သိရတယ် ။ အမေရိကန် ပြည်ထောင်စုကို တချို
မြန်မာတွေ အတော် အားကျတာကိုတွေ.ရတယ် ဘာကို အားကျတယ် ဆိုတာ
တော့ မသိဘူး၊ အမေရိကန် ခေါင်းဆောင်တွေ သူတို.နိင်ငံကိုဘယ်လိုထူထောင်
ခဲ့တယ်ဆိုတာကို ရေရေလည်လည် သိရှိနားလည်ပြီး အားကျတာလား ။
ဥပဒေတွေ အကြောင်းပြောရရင် မြန်မာနိုင်ငံမှာ ဥပဒေတိုင်းဟာ တရားတယ်လို.မဆိုနိုင်ပါဘူး တဲ့။ ဟုတ်ပါလိမ့်မယ် ဒါကြောင့် တရားသူကြီးဆိုတာက အမှုကို ကြားနာစစ်ဆေး တရားသဖြင့်ဖြစ်အောင် ဆုံးဖြတ်ပေးရပါတယ် ၊ ဥပဒေအရ လိုအပ်တဲ့ အချက်အလက်တွေ၊ သက်သေ အထောက်အထား မခိုင်လုံ။ အမှုစစ်
ပုလိပ်ရဲ့ ချွှတ်ချော်မှူတွေ ကြောင့် တရားခံ လွတ်သွားရတာကို ဥပဒေကမတရား
ဘူးလို.ပြောလို.မရသလို ၊ တရားခံကို ဥပဒေအရရုံးမတင်ဘဲ စွဲခန်.လူထုခုံရုံးနဲ(ဒီမိုကရေစီ)ဖြစ်စေ၊ ထုံးတမ်း စဉ်လာအရဆိုပြီးဖြစ်စေ နီးရာသစ်ပင်မှာချက်ချင်း
လယ်ပင်းကြိုးတတ်အသေသတ်လိုက်တာဟာလဲ တရားတယ်လို. ပြောလို.မရပါ
ဘူး ။ ကိုယ်ဖြစ်စေခြင်တိုင်း မဖြစ်ရလို.တော့ ဥပဒေကို မတရားဘူးလိုပြောတာ
ကိုကဘဲ တရားခြင်မှတရားပါလိမ့်မယ် ။
ဥပဒေဟာ အခြေအနေ အချိန်အခါအလိုက် လိုအပ်သလို ရေးဆွဲု ပြဌာန်းတယ်
လို. သိရပါတယ် ။ တချို.ဥပဒေတွေဟာ အချိန်အခါ အလျှောက် တရားမျှတမှူ မရှိသလို ဖြစ်လာရင် ဒီဥပဒေကို လွှတ်တော်က အမြန်ဆုံးပြင်ဆင်ရပါလိမ့်မယ်။ ဥပဒေသစ် မထွက်မချင်း အရေးပေါ်ပြဌာန်းချက်တွေ မထွက်မချင်း ဥပဒေတခု
ဟာအတည်ဖြစ်နေတာမို.ဒီဥပဒေကိုလိုက်နာမြဲလိုက်နာ နေကြ ဘို.လိုအပ်ပါ
လိမ့်မယ် ၊ ဖီဆန်လို.တော့ မဖြစ်ဘူးထင်တယ်။
ပြောစရာက မြန်မာနိုငံဟာ အင်္ဂလိပ်လက်အောက်ရောက်ခဲ့တာမို.ဥပဒေတွေဟာ
လဲ သူတိုသဘောကျြ့ပဌာန်းထားတာလို.ပြောနိုင်ပါ တယ် ။ အင်္ဂလိပ်ကို တွန်းလှန်နေတဲ့ အချိန်မှာ အင်္ဂလိပ် ပြဌာန်းတဲ့ တချို.ဥပဒေတွေဟာ “သဘာဝမကျ လူသားမဆန် တရားမျှတမှု့ မရှိတာတွေ ” လို..မြင်ကြတာကို နားလည်နိုင်
ပါတယ် ။ “ မြန်မာနိင်ငံမှာသုံးတဲ့ ဥပဒေတွေဟာ Made in India under British licensed . တွေဘဲ ၊ “အိန္ဒိယ ရာဇသတ်ကြီး ဥပဒေ” ဆိုတာ ကြားဘူး မှာပေါ့၊ အခုတော့ မှူပြစ်ဆိုင်ရာ(သို.) ပြစ်မှုဆိုင်ရာ ဥပဒေလို. ခေါ်နေကြ ပါတယ် ။
မြန်မာတချို.ဟာ Indian Civil Service ( ICS) ဆိုတဲ့ ဘွဲ.တွေ ဂုဏ်တွေ ရှိမှ လူရာဝင်တယ် ၊ အုပ်ချုပ်ရေး ရာထူးရာခံတွေ ရထိုက်တယ် ၊အင်္ဂလိပ်စကားနဲ့
စာဖြစ်စေ ၊ ဟိန္ဒူစကားနဲ့ စာဖြစ်စေ တတ်မှ အစိုးရနဲ ပါတ်သက်တဲ့ ဌာနတွေမှာ အလုပ်ရတယ် ဆိုတာတွေက စပြီး ဗမာတွေ အလုပ်ကောင်း မရနိုင်ခဲ့ဘူးလို.မှတ်တမ်းတွေမှာ တွေ.ရတယ် ။ ရရင်လဲ ဘာယီယ အလုပ်ဘဲ တဲ့။
ဒီနေ.မြန်မာနိုင်ငံမှာ မြန်မာစာနဲ့စကား ရုံးသုံးဆိုတာကို တချို.က မတရားဘူးလို.တောင်ပြောနေကြတော့ တခြား ဥပဒေတွေကိုလဲ တရားတယ် မျှတတယ် လို.ထင်လိမ့်မယ်မဟုတ်ဘူး၊ ဒါကို ပေါ့ပေါ့ထင်ရင် မှားသွာလိမ့်မယ် ။မြန်မာ့လက်
ထက်မှာ ဥပဒေတွေကို အခေါ် အဝေါ်ပြောင်းတာတွေ ရှိခဲ့ပေမဲ့ အဓိပါယ်ဖေါ်ပြ
ချက် ၊ အတွင်း အချက်အလက်တွေ ဘယ်လောက်ပြောင်းလဲပစ်တယ်၊ ပြင်ဆင်
တယ် ဆိုတာတော့ မသိပါဘူး၊ ဆိုရှယ်လစ် ဥပဒေတွကလွှမ်းပြီး ချုပ်ထားတယ် လို.ဆိုရင်တော့ မှန်ပါလိမ့်မယ် ။ အားလဲူးနီးနီး ဖြစ်နိင်သေးတယ် ။
ဥပဒေတွေဟာ သူဟာသူ အဓိပါယ် အတိအကျ ဖွင့်ဆိုပြီးသားပါ ၊ ကနဦး အစချီထဲက “ ရှေနောက်စကား မဆန်.ကျင် လျှင် ” ဆိုတဲ့ စကားနဲ့စပြီး ဘယ်ဟာက ဘာကိုဆိုလိုတယ်လို.ပြောထားတာကိုသတိထားမိလိုက်တယ်၊
ခေတ်ပြောင်းလာလို. စံနစ်ဟောင်းတွေကို အားလုံးစွန်.ပစ်ရမယ်၊ ဥပဒေ
တွေကို ဖျက်ပစ်ဘို.တော့ မဟုတ်ပါဘူး ။ ကောင်းတာ ဆယ် မကောင်းတာ ပါယ် ဆိုတာတော့ ဖြစ်သင့်ပါတယ် ၊
၀န်ကြီးတွေ ၀န်လေးတွေ ၀န်ထမ်းတွေကိုသာ ထိုင်ရှိခိုးရရင်တော့ ဘုရားနဲ.သံဃာ မလိုတော့ဘူးပေါ့။ လူတွေထဲမှာရော ဘုန်းကြီးတွေထဲမှာပါ ဘုရားနဲ့
တန်းတူသူမရှိပါဘူး ၊ ဘုရားနဲ့တဂိုဏ်း ထဲ ထားတယ်ဆိုတဲ့ စကားဟာဘဲ လွန်လှပြီ၊ လူတွေထဲမှာ ဘုန်းကြီးတွေထဲမှာ ဘုရားနဲ့ တဂိုဏ်းဘဲ ထားထိုက်သူ
တွေဆိုတာ ကျုပ်မတွေ.ဘူး ဘူး၊ ပြောရမယ်ဆိုရင် ဘုရားရဲ့ ဂုဏ်တော် ၉ ပါးနဲ့ ညီတဲ့ လူ ၊ ဘုန်းကြီး ရှိသလား မလားကို စမ်းစစ်ရလိမ့်မယ် ၊ သင်္ဃန်းဝတ်တိုင်း
ဟာ ဘုန်းကြီးမဟုတ်ပါဘူးလို. ပြောဘူးပါတယ် ၊၊ ဥာဏဗလ စာရိတ္တဗလ ဆိုတာတာဘုန်းကြီးတွေနဲလဲ ဆိုင်မယ်လို.ြေ့ပာခြင်တယ်။
ကမ္ဘာ.အဆင့်ဆိုတာဘာလဲ မေးရင် ၊ ဘာမှ မဟုတ်ဘူးလိုကျုပ်ကတော့ဖြေမှာဘဲ
၊ ကျုပ် ဘာပြောနေတယ် ဆိုတာ ကျုပ်သိတာပေါ့၊ သူများတွေ ဘာပြောနေတာ
လဲ ဆိုတာလဲ ကျုပ်သိတယ် ။
နောက်ဖေးလမ်းကြားဆိုတာ နိုင်ငံတိုင်းမှာရှိတယ်၊ သူတောင်းစားဆိုတာ နိုင်ငံ
ံတကာမှာရှိတယ်၊ ဖါသယ် ဖါကောင်းဆိုတာနိုင်ငံတကာ မှာရှိတယ်၊ ဒီနေ. မြန်မာနိုငံကို ၁၉၈၈ ခု မတိုင်မီကမြန်မာနိုင်ငံနဲ.နှိုင်း လိုက်ရင် ခေတ်မီလာပြီလို.ပြောမလား၊ ဘယ်အပိုင်းခေတ်မီလာသလဲဆြို့ပိး မမေးနဲ့.၊ ကိုယ့်ဟာကိုယ် မြင်အောင်ကြည့်ကြ ၊ ကျုပ်ကတော့ ဒါတွေဟာ ပေးရမဲ့ အဘိုးဆာနားတွေပါ လို.ဘဲ ဖြေတော့မှာ ။
အမြင်ကျယ်ရင် မျက်လုံးပြူးတယ်လို.ပြောမလား၊ အမြင်ကျဉ်းရင် မျက်ခန်းစပ်
လို.ဆိုမလား ဘဲ။ အမြင် ကျယ်သူကို ဒိဗ္ပစက္ခု အလင်းရနေ တယ်လို.မထင်နဲ့.နော်. သမိုင်းလေ.လာသူတွေ ရှေ.အနာဂါတ်ကိုကြိုတင်တွက်ချက် မြင်တတ် သူတွေဟာလဲ စုံးကဝေ မှော်ဆရာတွေ မဟုတ်ဘူး ။ ဂေါ(ဒ) ဖန်ဆင်းတဲ့ လူ ဆိုတာ အာဒန် နဲ့ အိ ၂ ယောက်ထဲသာဖြစ်တယ်ဆ်ိုတာ ခရစ်ယန်တွေ သိကြ
ကျုပ်က တော့ ဖန်တည်းရှင်ဆိုတာ လူ ကိုပြောတာလို.ဘဲ ဆိုခြင်တယ် ၊ လူတွေဟာ ဖန်တည်းရှင်တွေ စွမ်းအားရှင်တွေ ဘဲ ။ ဘုရားတို. ၊ ဂေါ(ဒ်) ဆိုတာတွေကို လူက သတ်မှတ်တာ ပညတ်တာ၊ လူသာလျှင်ပထာဏ လို.လဲ တချို.ကဆိုတယ် ။ အလွှာအသီးသီး အထက်က အောက်ထိ ဥာဏဗလ ၊ စာရိတ္တဗလ မြင့်ကြဘို.လိုတယ် ။ ဘယ် လိုလုပ်ရင်ကောင်းမလဲ ၊ ပညာပေးခြင်း (အနုနည်း)၊ ဥပဒေနဲ့ပြင်းထန်စွာ ထိထိရောက်ရောက် အရေးယူခြင်း(အကြမ်းနည်း) တွေနဲ့ပြုပြင်ရမယ် ၊၊
ပြောလိုက်အုံးမယ် ၊ မြန်မာမှုမှာ “ မကောင်းမြစ်ရာ ကောင်းရာညွှန်လပ်” ဆိုတာရှိတယ် ။ ကိုယ့်သားသမီး သူများသားသမီးတွေကို အမြင် မတော်ရင် ပြောဆိုဆုံးမကြ တာတွေဟာ“ အမြင်မတော်ရင် ဆုံးမကြပါ” လို. မိဘတွေ
ကိုယ်တိုင်ကလဲ ဆုံးမစေခြင်ကြ တယ် ၊ ဆရာဆရာမတွေဟာလဲ အတူတူဘဲ ကိုယ့်သားသမီး သူများသားသမီးဖြစ်တဲ့ ကျောင်းသူကျောင်းသားတွေကို ကျောသား ရင်သား မခွဲခြားဘဲ ဆုံးသွန်သင် ပဲ့ပြင်ကြတယ် ၊ ဆုံးမတာမှာ အကြောင်းအကျိုးနဲ.ရှိရမယ်လို.လဲပြောထားတယ်။
ခေတ်နောက်ကျနေတဲ့ မြန်မာ့ ဓလေ့ ယဉ်ကျေးမှု ထုံးတမ်းစဉ်လာတွေဘဲလို.ပြောပြော ခေတ်မမီဘူးဘဲ ပြောပြော၊ လွတ်လပ်မှု ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုကိုနှောင့်နှေး
စေတယ် အဟန်.အတားဖြစ်နေတယ်လို တချို.က စာဖွဲ.ကြလိမ်အုံးမယ်။
မေးခြင်တာက ဘာမဆိုင်တဲ့ ပထွေးတွေ မိဒွေးတွေက လာပြောတော့ ၊ ဘယ်လို
သဘောရသလဲ ? လာပါအကို လာပါ အမ ၊ ရေနွေးချမ်းပူပူလေး သုံးဆောင်
ပါအုံး ၊ လဘက်ကလေးစားသွားပါအုံး လား ? သူတို.ကိုများ သွားပြောကြည့်စမ်း
နန်းအော့(ဖ)ယော် ဘိဇနက်ဆိုပြီး ထတုတ် ထအုပ် လိုက် လိမ်.မယ် ။
လူကြီးတွေ ပြောဘူးတယ် ၊ အတွင်းစကား အပြင် မရောက်စေနဲ့ တဲ့၊ ကိုယ့်
လူမျိုး မကောင်းကြောင်းပြောရတာ ရင်ထုမနာ ဖြစ်ရတယ် ။အကြောင်းအကျိုးနဲ.
ပြောစရာရှိရင် ကိုယ်ဘဲပြောခြင်တယ်ဆိုရင်မလွန်ပါဘူး ၊ အပြင်သူတွေ ပြောတာ
မခံနိုင်ပါဘူးလို.ပြောဘူးတယ်၊၊ ကိုယ့်လူမျိုးအကြောင်း၊ ကိုယ့် နိုင်ငံအကြောင်း ကိုယ်ကမသိဘူး သူများ ပြောမှ သိရမှာဆိုရင်တော့ မဟန်တော့ဘူး၊ ကိုယ်.အကြောင်း ကိုယ်သာ အသိဆုံးဖြစ်ရမယ် ။ မသိဘူး ဆိုတာကိုက ဟုတ်ကို မဟုတ်တော့ဘူး၊၊
မနေ.တနေ.ကလဲ ဗလ ၅ တန် ဆိုတာထည့်ပြောခဲ့.သေးတယ်၊ ဒီထဲက ဥာဏဗလ နဲ့ စာရိတ္တဗလတို. အရေးကြီးပုံကိုအရိတ်အမြွတ် ပြောခဲ့တယ် ၊ အကျယ်ချဲ့စရာလဲ သိပ်မလိုပါဘူး ၊ နားမလယ်စရာမရှိပါဘူး ။ ဥာဏ်မရှိရင် တိုးတက်ကြီး ပွားအောင် မလုပ်နိုင်ဘူး ၊ ရှိပြီးသားအားအင် ကို ချိနဲ့စေမယ် ၊ စာရိတ္တမကောင်းရင်တော ပြောမနေတော့နဲ. ၊ ရှိတဲ့ဥစ္စာ ပစ္စည်း ဆုံးရှုံးမယ်. မိတ်ဆွေ အပေါင်း အသင်း ကင်းမဲ့ မယ် ။ ကိုယ့်ကို လူမသိခြင်ဘူး ရှောင်ခွာကြ
မယ် ၊ အကောင်း ပြောစရာ ဘာတလုံးမှ မရှိတော့ဘူး ။
အဲဒါကို ကြည့်ပြီး မြန်မာတွေရဲ့ အင်အားခွန်အားဆိုတာအရာရာမှာဥာဏဗလနဲ့
စာရိတ္တဗလတို.က အက္ခရာဖြစ်တယ်ဆိုတာ သိစေလိုတယ် ။ ဒီလိုပြောလို. နားလယ်ကြမလား မသိဘူး။ “ ကံရှိသော်လည်း ဥာဏ်မရှိ လို. မွဲရ တယ် ” တဲ့ ၊ မြန်မာစကားရှိတယ် ၊ စာရိတ္တမဏ္ဍိုင်ကြံ.ခိုင်ကြရမယ်ဆိုတယ်- မခိုင်ရင် ဘာဖြစ်မယ်ဆိုတာ လူတိုင်းသိ နေတာဘဲ ။ အကျယ်ချဲ.ဘို.လိုသေးသလား၊
နောက်ဆုံးပြောခြင်တာကတော့ ဘာသာတရားရဲ့ သင်ပြမှုတွေကို လိုက်နာရင်၊ ဥာဏ်ပညာ ပြည့်စုံပြီး၊ စာရိတ္တမဏ္ဍိုင်ကြံ့ခိုင်လာကြ လိမ်.မယ်လို.အမှန်တကယ် ယူဆတယ် ။
ဗုဒ္ဒဘာသာ ဥပဒေကြီးဆိုတာနဲ.လူတွေကိုတော့ အုပ်ချုပ်လိုမရသေးဘူးထင်
တယ်၊ မြန်မာတွေ အားလုံး ဗုဒ္ဒဘာသာဝင်တွေ မဟုတ်သေးဘူး ၊ ဂေါတမ ကိုယ်တိုင်က အခါအားလျှော်စွာ တရားဓမ္မ နာယူပါ ၊ ဆွေးနွေးပါလို.ဘဲဟော
ပျော် ပျော် ပါးပါးပေါ.။